Beesha Caalamka Oo Afka Gacanta Saartay..Hoos U dhaca Ku Yimid Taageerada Farmaajo | Xaqiiqonews
Beesha Caalamka Oo Afka Gacanta Saartay..Hoos U dhaca Ku Yimid Taageerada Farmaajo
Ka dib Labo Sano oo xukunka haayey waxa uu hadda wajahayaa xaaladdii ugu adkeyd waxaana hoos u dhac weyn uu ku yimid kalsoonadii ay ku qabeen shacabka, dhawaan hey,adda IPSOS/Farsight Africa Research ay shaacisay daraasad arimhaasi ifineysa.
Xog uruurin iyo qiimeyn ay sameysay hay’adda IPSOS/Farsight Africa Research ayaa sheegtay in Madaxweyne Faraamjo shacabkiisa ka haysto tageero boqolkiiba 67 (67%) waaa sanadkan 2018 oo uu ku dhaw yahay sanad guuraddiisii labaad halka uu marka uu talada dalka qabtay uu haystay boqolkiiba 86 (86%).
Xogtan waxa ay muujineysaa in Madaxweyne Farmaajo uu lumiyey taageerayaal badan mudadii 20-lii bilood ee uu talada haayey.
Mushkiladda luminta taageerayaasha ma ahan oo kaliya mid ku eg Farmaajo waxeyna arinta saameysay Kheyre oo isna markii ugu horeysay la shaaciyey in uu lumiyey taageerayaal.
Ra’usl Wasaare Xassan Cali Kheyre waxa uu haystaa boqolkiiba 62%, waana sanadkan 2018 halka 2017 uu haystay boqolkiiba 83%